Kuxoxe! | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 4, 2009 NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2016 Douglas Karr
IMicrosoft iqhubekela phambili neGoogle ngegama eliye lafana nosesho kanye nokubaluleka kweGoogle =. Nayi ifayili le- Okokuqala ukuthengisa okusetshenziswa yiMicrosoft.
Ngiyethemba impela ukuthi iMicrosoft ingaphonsela inselelo ngolaka kuGoogle Bing. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngiyisebenzise njengenjini yami yokusesha ezenzakalelayo, futhi ngithola imiphumela efanelekile - lelo igama lomdlalo.
Uma ubheka imboni yezokumaketha yezinjini zokusesha, iGoogle yenze umsebenzi omuhle kakhulu wokuchaza ukuthi yini ukusesha kodwa iguqule indlela yethu yokuziphatha nokwamukelwa esikhathini esizayo. Sonke sigxila enhlanganisweni yamagama asemqoka - futhi siyazama futhi ukuzama lapho singatholi mphumela. Ngakolunye uhlangothi, izinkampani zokwenza izinjini zokusesha zigijimisa ukudlala uhlelo ngemikhankaso yokuxhuma emuva kunokuba nezinkampani zazo zimane zibhale okuqukethwe okuphoqayo. Ukuxhumanisa emuva kuhlanekezela ukufaneleka ku-Google futhi kwenza kube nzima eminye yemiphumela emihle ukuthola ukubekwa okuhle kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, ngiyaqonda ukuthi amagama abantu abawasebenzisayo ukusesha awafani namagama okufanele kusetshenziswe amabhizinisi ukuze atholakale; kepha, ukusesha kufanele kuhambisane kancane kancane futhi kunqotshwe lezo zingqinamba. Uma ngifuna udokotela wamazinyo omkhulu, kungani angibekwanga ekhasini lemiphumela nodokotela bamazinyo abaseduze kwami ​​abanezibuyekezo ezinhle ezivela kweminye imithombo ukukala # 1?
Esikhundleni salokho, ngithola kuphela izinkomba, futhi odokotela bamazinyo bakazwelonke babalwa ngoba basebenzise amagama asemqoka kuzihloko zabo zekhasi, kokuqukethwe, naku-backlinks. Leyo akuyona impendulo efanele. (I-Bing ayiyikhonkothi, futhi). Bekuzoba nzima kanjani ukufaka isicelo isizinda sedatha ye-IP vula bese uhlanganisa imiphumela yosesho nezinye zasendaweni, futhi?
Sekuyisikhathi sokuthi usesho lube nobuchule, futhi ngiyethemba umncintiswano phakathi Bing futhi -Google ithuthukisa lonke ulwazi lokusesha kwi-Intanethi.
Tags: i-bingbing kwezohwebo-Microsoftukusesha ngokweqile
Isikhathi Sokubuyisela Inkampani Yakho Phansi
Jun 5, 2009 ku-10: 40 PM
Ngiyabonga ngamakhanda aphakeme mayelana ne-BING, bengingayazi kuze kube manje. Ngithumele amawebhusayithi ambalwa, futhi ngizibuza ukuthi ngabe azongilethela noma yimuphi umgwaqo owengeziwe. (Nginezibalo zeGoogle kumasayithi, angazi ukuthi lokho kuzongitshela yini ukuthi kukhona noma iyiphi ithrafikhi evela ku-BING.)
Ngithumela okwesibili ukuphawula ngokuncintisana mhlawumbe kusiza ekuthuthukiseni ubuhlakani bosesho, obonakala busalele emuva kakhulu ngemuva kobuchwepheshe obungeke bube khona.